Resaky ny mpitsimpona akotry : soatoavina repoblikana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : soatoavina repoblikana
Tsy vahiny amin-dRaolomenona i Rafialonandava. Ho an’ireo manan-toetra, matetika efa raiki-tapisaka mihitsy izy io nefa tsy mandravaka toy ny tandra vadin-koditra fa manaratsy tarehy toy ny vay an-kandrina. Tolona moa ny fiainana ary matetika mifangaro fifaninana. Tsy miavaka amin’izany ny fanaovana pôlitika, manjaka lalandava ny fifaninana. Na samy ao anatin’ny antoko aza, mifanina ny mpiray dia. Lasa fitenenana ny hoe fifaninana masina mba anavahana ny fifaninana tsotra amin’ny firafesana. Na mety hitovy aza ny tanjona, samy hafa ny toe-tsaina sy ny fomba fanaovana ezaka ahatrarana ny tanjona. Na samy manana ny fanavahana ny madio sy ny maloto aza ka ny vandana mety tazan’ny sasany ho toy ny madio nefa jeren’ny hafa ho maloto. Eo ny fitsipika mipetraka mametra ny fanajana ny rafitra izay mampijoro ny Repoblika ho Repoblika. Fehezin’ny rafitra ny rehetra, hanaja ny fitsinjarana adidy amin’ny fanajana an’izay miandraikitra adidy araky ny sokajy itoerany. Io no eo. Io no hajaina noho izany toerana misy azy izany. Milefitra amin’
izany ny rehetra. Izay no ahafahana mitaratra ny toe-tsaina mahatsapa ny hasin’izany hoe fanjakana izany. Ireo tsy manaja izany, na amin’ny endrika aseho ivelany fotsiny aza dia sady manipaka ny rafitra repoblikana no manosihosy ny demôkrasia.
Tsy fantatra izay tena mitranga ao anatin’ny governemanta ankehitriny. Tsy mitombina izany firaisankinan’ny mpiray antoko izany raha tarafina avy amin’ny tsy fahatongavan’ny ampahefatry ny mpikambana ao tamin’ny fiarahabana ny lehiben’ny governemanta. Misy ve ny firafesana fanaovana ankolafilafiny. Misy ve ny mihevitra ny tenany ho mena ambonin’ny mena izay mpitarika azy anefa araky ny rafitra mipetraka ? Raha izay fialonana izay aza no tsy resy mba hitondrana fitoniana ho an’ny vahoaka izay efa miroroa saina noho ny fiheverany ny tenany ho kamboty velon-dray raha ny fanjakana sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena no entiny mandinika an’izany. Tsy misy aza ny toy izany dia efa miparitaka izao karazana tsaho rehetra izao, mainka fa rehefa misy manaha lamba toy izao. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka hono ka samy misafidy ny maheriny fa mandodona ny fanavaozana. Ao ireo maminany fanovana governemanta. Anilan’izany misy ny mihevitra fa hoso-doko teknika fotsiny no konokononin’ny Praiminisitra izay mbola hitana ny toerany.